गगन र राजनलार्इ टक्कर दिँदै सुबुना भन्छिन्…. – Nepal Journal
Posted By: Nepal Journal November 15, 2017 | २९ कार्तिक २०७४, बुधबार १७:३४
काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर–४ मा नेपाली काँग्रेस र वाम गठबन्धनका उम्मेदवार गगन थापा र राजन भट्टराईपछि चर्चाको शिखरमा रहेकी अर्को पात्र हुन विवेकशील साझा पार्टीकी सुबुना थापा । उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा गगन थापा र राजन भट्टराईबीचमा मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने एकाथरीको तर्क छ । तर विवेकशील साझा पार्टीकी उम्मेदवार सुबुना बस्नेत यो भनाईलाई अस्वीकार गर्छीन् । निर्वाचन प्रचार प्रसारका लागि घर दैलोमा निस्कन हतार गर्दै गरेकी बस्नेतसँग निर्वाचन केन्द्रित भएर नेपाल जर्नलकर्मी नविन ढुंगानाले गरेको कुराकानी यस्तो छ ।
चुनावी अभियान कसरी अगाडि बढ्दैछ ?
बिहान करिब सात बजेतिर हामी तोकिएको स्थानमा भेला हुन्छौँ । त्यस्तै ८ बजेतिरबाट घरदैलो अभियान सुरु हुन्छ । हामी बिहानको घर दैलो अभियान ११ बजे सक्छौँ । त्यसपछि खाना खाने आराम गर्ने र पार्टीको कार्यलयमा भेला भएर बिहानी घरदैलोको समीक्षा गर्छौं, मिडियालाई समय दिन्छु र दिउँसोको घरदैलोको योजना बनाउँछौँ । दिउँसो साढे तीन बजेपछि फेरि हामी घर दैलोमा निस्कन्छौँ । घरदैलौ साँढे ५ बजेसम्म चल्छ र पुनः हामी हाम्रो पार्टी कार्यालयमा जम्मा भएर दिनभरिको समीक्षा र भोलिको याजेना बनाउँछौँ । यसैगरी दिन बितेको छ ।
“ मतदाताहरुबाट निकै राम्रो प्रतिक्रिया पाएको छु ।
यस क्षेत्रमा मतदाताले मलाई छोरी, बैनी जस्तो आफ्नै
घरको सदस्य ठानेर हौसला दिनुभएको छ ।
हामी तपाईलाई मत दिन्छौँ भनेर
प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ ।
म उहाँहरुको भावना र विश्वासलाई
शीरोधार्य गरेर चुनावी
अभियानमा उत्साहीत भएर लागेको छु ।”
काठमाडौँ क्षेत्र नं.४ का जनताले विवेकशील साझा र सुबुना बस्नेतलाई किन भोट हाल्ने ?
म के भन्छु भने हामीले अरुलाई पटक पटक हेर्यौँ एकपटक हामीलाई हेर्नुहोस् भन्न चाहान्छु आम मतदातालाई । अब विकास र समृद्धिका लागि कसैले गर्न सक्छ भने त्यो विवेकशील साझा पार्टीले मात्रै गर्न सक्छ । सु–संस्कृत राजनीतिको जगमा उभिएर एउटा काठमाडौँ ४ लाई नमूना बनाउन म प्रतिबद्ध र जिम्मेवार छु । मलाई विश्वास छ, मेरा क्षेत्रका मतदाताले यो कुरा बुझेका छन् । मलाई विजयी हुने गरी भोट दिनुहुन्छ ।
तपाई मतदाताको घरदैलोमा पुग्दा तपाईलाई मतदाताले के भन्छन् ?
मतदाताहरुबाट निकै राम्रो प्रतिक्रिया पाएको छु । यस क्षेत्रमा मतदाताले मलाई छोरी, बैनी जस्तो आफ्नै घरको सदस्य ठानेर हौसला दिनुभएको छ । हामी तपाईलाई मत दिन्छौँ भनेर प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ । म उहाँहरुको भावना र विश्वासलाई शीरोधार्य गरेर चुनावी अभियानमा उत्साहीत भएर लागेको छु ।
काठमाडौँ ४ मा तपाईले विजय हासिल गर्न सक्ने आधारहरु के के हुन् ?
देशका अरु क्षेत्रभन्दा यो क्षेत्र पनि फरक छैन । पुराना दलहरुले अरु क्षेत्र जस्तै जनताका आधारभूत आवश्यकताका कुराहरुलाई भताभुङ्ग बनाएर छाडेका छन् । खानेपानी, सडक, ढल, सार्वजनिक यातायात,जस्ता विकासका आधारभूत सूचकहरु सबल छैनन् । ति सबै अब्यवस्थाको सही व्यवस्थापन मेरो प्रतिबद्धता हो । पुराना राजनीतिक दलका ब्यवहारबाट आम जनता आजित बनेका छन् । त्यसको उत्तम विकल्प मै हुँ, र हाम्रो पार्टी विवेकशील साझा पार्टी नै हो । नयाँ सु–संस्कृत राजनीतिक सोच र भ्रष्टाचार मुक्त समाजको निर्माण मेरो मुख्य लक्ष्य हो । यो कुरा जनताले बुझेका छन् । उहाँहरुले मलाई विश्वास गर्नुभएको छ ।
यो निर्वाचन तपाँईको मुख्य प्रतिस्पर्धी को हो ?
वैकल्पिक राजनीतिक चेतनाको हिसाबले हाम्रो पार्टी र मेरो प्रतिस्पर्धी कोही छैनन् । तर निर्वाचनमा पार्टी संगठनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले लोकप्रिय मत र विचारका हिसाबले गगन थापा र राजन भट्टराई भन्दा म कमजोर छैन । यो बेला नेतृत्व छान्ने बेला हो । छान्ने भनेको सही गलत छुट्टयाउने बेला हो । जनताहरुले जिताएको पठाएको नेताहरुले पटक पटक जिते तर जनताले कहिल्यै जित्न नसेको कुरा यो क्षेत्रका जनताले बुझेका छन । यहाँका मतदाताले सही गलत छुट्टयाउन जानेका छन् । आँखा चिम्म गरेर मत खसाल्ने छैनन् ।
निर्वाचन सम्बन्धी जिज्ञासा छ ? तपाईको जिज्ञासा समाधान गर्छ कल सेन्टरले
विराटनगरवासीको एकै स्वरः आश्वासन होइन विकास, डुबान होइन निकास
Be the first to comment on "गगन र राजनलार्इ टक्कर दिँदै सुबुना भन्छिन्…."